रविन्द्रकै समान भोट ल्याइन् विद्याले: १५ हजार गन्न बाँकी छँदा, विद्या ८ हजार मतले अगाडी – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/रविन्द्रकै समान भोट ल्याइन् विद्याले: १५ हजार गन्न बाँकी छँदा, विद्या ८ हजार मतले अगाडी
रविन्द्रकै समान भोट ल्याइन् विद्याले: १५ हजार गन्न बाँकी छँदा, विद्या ८ हजार मतले अगाडी
काठमाडौं, १५ मंसिर । कास्की २ मा भएको प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि भएको मतदानमा अब १५ हजार भोट गन्न बाँकी छ । सो निर्वाचनमा सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकी विद्या भट्टराईको अग्रता कायम छ । मतगणना सुरु हुनासाथ अग्रता लिएकी भट्टराईले अन्तर बढाउँदै लगेकी हुन् ।
शनिबार भएको उपनिर्वाचनमा ४५ हजार ५ सय ६३ मत खसेको थियो। आइतबार अपरान्हसम्म ३० हजार ३ सय ३५ मत गणना सकिँदा विद्याले १७ हजार ६ सय ५० मत पाएकी छन्।
यो मतान्तर २०७४ सालमा रवीन्द्र अधिकारीले जिते बराबरकै मतान्तर हो । अघिल्लो निर्वाचन रवीन्द्रले कांग्रेस उम्मेदवार देवराज चालिसेलाई ८ हजार ५ सय ४६ मतान्तरले विजय हासिल गरेका थिए । ११ वडामध्ये अझै ५ वडा वडाको मतगणना बाँकी नै छ । उनलाई पछ्याइरहेका नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार खेमराज पौडेलले ९ हजार २ सय २४ मत प्राप्त गरेका छन् ।तेस्रो स्थानमा समाजवादी पार्टीका धर्मराज गुरूङ छन्। उनले १३१६ मत ल्याएका छन्। साझा पार्टीकी उम्मेदवार रजनकी केसीले ४५७ मत पाएकी छन्। मतगणना जारी छ।
भरतपुर विमानस्थल आजदेखि १० दिन बन्द हुने भएको छ । विमानस्थलको धावनमार्ग मर्मतसम्भार गर्न आजदेखि मङ्सिर २४ गतेसम्म बन्द गरिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण भरतपुर विमानस्थल कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका प्रमुख पवनकुमार गौतमका अनुसार विमानस्थल १० दिन बन्द रहने सूचना जारी गरिसकिएको छ । धावनमार्गको ठाउँ–ठाउँमा खाल्डाखुल्डी परेकाले धावनमार्ग र पार्किङस्थल मर्मतसम्भारका लागि प्राधिकरणले ठेक्का लगाएको हो ।
आज काठमाडौंमा यो बर्षकै चिसो ! बिहानको तापक्रम ४ डिग्री सेल्सियस
कसको सिफारिसले को बन्ला ? भावी अख्तियारको प्रमुख आयुक्त !
नेपालकी पुष्पा बस्नेत दशककै प्रेरणादायी व्यक्तित्व घोषित